Ụkpụrụ okpuru - Atụmatụ Echiche Tattoos
1. Ogbugbu okpueze na mkpiri ink nke ink na-eme ka ha maa mma
Ụmụ agbọghọ ndị nwere akpụkpọ anụ na-acha aja aja ga-ahụ okpu okpueze na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ na azụ. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma n'anya ọha
2. Okpueze egbu egbu n'olu eme ka anya na-adọrọ adọrọ
Ụmụ agbọghọ na-eto eto na-etinye aka na-enweghị aka ga-ahụ okpu okpueze na azụ azụ; egbu egbu egbu a na-eme ka ha yie ihe mara mma
3. Ụmụ agbọghọ na-achọ ka egbugbere okpueze na ink ime mma. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dịkwuo mma
Ụmụ agbọghọ Brown ga-ahụ okpueze egbu egbu na azụ azụ na pink na oroma ink imewe okpueze; egbu egbu egbu a na-eme ka ha maa mma
4. Ọdịdị ọchịchịrị nke okpueze egbu egbu n'azụ azụ iji mee ka ụmụ agbọghọ nwee anya dị mma
Ụmụ nwanyị na akpụkpọ anụ piich ga-aga maka egbugbere ọnụ nke okpueze a site na nkedo ink nke oji n'azụ ha, iji mee ka ha nwee anya mara mma.
5. Ogbugbu okpueze na ogwe aka dị ala na-eme ka nwanyị na-elegharị anya
Ndị inyom na-eyiri uwe ojii na-enweghị aka n'anya ima egbugbu okpueze na ogwe aka ala; Ejiji egbu egbu a na-ejikọta elu ojii iji mee ka ha maa mma ma mara mma.
6. Na-eme ka okpueze Chineke egbu egbu na ụkwụ iji mee ka ọ mara ya
Ụmụ agbọghọ na-eme ka okpueze okpueze dị n'ụkwụ iji gosipụta ụkwụ ha ma mee ka ọ bụrụ ebe na-adọrọ mmasị
7. The pink, ink mix design Eke egbu egbu na azụ n'olu mee ka ụmụ agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ ndị na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ na-egbuke egbuke ga-aga maka egbugbere ọnụ okpueze na-eji nkedo ink pink na azụ n'olu iji mee ka ha mara mma n'ihu ọha
8. Ogbugbu egbugbere na azụ mere ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ na akpụkpọ ahụ na-acha uhie uhie na ntutu na-egbu egbu egbugbu egbugbere ọnụ na-eji ejiji agba aja aja; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma mara mma
9. Okpueze egbu egbu maka Women n'ubu mee ka ha mara mma
Ụmụ nwanyị nwere akpụkpọ anụ na-acha aja aja ga-ahụ okpueze okpuru na ubu. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma n'anya ọha
10. Ogbugbu egbugbere na azụ mere nwa agbọghọ mara mma ma mara mma
Ụmụ agbọghọ hụrụ okpueze egbugbu na azụ ha. Nke a na-eme ka ha mara mma ma mara mma
11. Okpueze egbu egbu n'azụ ntị eme ka anya nwanyi
Ụmụ agbọghọ dị ka egbugbere mara mma mara mma n'azụ ntị. Ejiji egbu egbu a mara mma.
12. Ogbugbu egbugbere maka ndi nwanyi ndi na-acha odo odo na-eme ka ha maa mma
Ụmụ nwanyị Brown na-ahụ ka egbugbere egbugbere ọnụ na-eji ejiji ink. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
ndị na-egbuke egbukeọdụm ọdụmarịlịka arịlịkakoi ika tattoona-adọ aka mmaỤdị ekpomkpaọnwa tattoosna-egbu egbudi na nwunyeagbụrụ eboegbu egbu hennamma tattoosakpị akpịnnụnụNtuba ntughariakwara obiegbu egbu diamondegbu egbu maka ụmụ nwokeokpueze okpuezeaka mma akaegwu egwuGeometric Tattoosechiche egbugbuegbu egbu ebighi ebirip tattoosmehndi imeweima ima mmaAnkle Tattoosngwusi pusiegbugbu maka ụmụ agbọghọzodiac akara akaraakara ntụpọegbugbu egbugbuudara okooko osisiụmụnne mgbuegbu egbuegbu egbu osisi lotusụkwụ akaegbu egbu egbun'olu oluenyi kacha mma enyiazụ azụaka akaegbu egbu mmiriegbu egbu okpundị mmụọ oziaka akaEgwu ugoUche obienyí egbu egbu